နိုဝင်ဘာလ 2020 | တစ်ဦးကရထား Save
လ: နိုဝင်ဘာလ 2020
နေအိမ် > နိုဝင်ဘာလ 2020
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ ဥရောပရှိချစ်စရာကောင်းသည့်မြို့ဟောင်းအဟောင်းများသည်ဥရောပ၏သမိုင်းကြောင်း၏အံ့သြဖွယ်ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်. ထူးဆန်းသောအိမ်များ, မြို့လယ်ခေါင်ရှိအထင်ကြီးလောက်သောဘုရားရှိခိုးကျောင်းများ, ကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းထားသောနန်းတော်များ, နှင့်ဗဟိုရင်ပြင်, ဥရောပမြို့ကြီးများ၏မှော်ထည့်ပါ. အဆိုပါ5most charming old…
ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ရထားခရီးသွားဘယ်လ်ဂျီယံ, ရထားခရီးသွားချက်သမ္မတနိုင်ငံ, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထား Travel အီတလီ, ဥရောပခရီးသွား
စာဖတ်ချိန်:6မိနစ်များ ခမ်းနားထည်ဝါစွာစိမ်းလန်းသောချိုင့်, ဘုံဗိမာန်, နှင့်ပါကျေးရွာများ, ဥရောပသို့လည်ပတ်ရန်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်နေရာများစွာရှိသည်. တစ်ခုချင်းစီကိုနေရာတိုင်းသင်သည်ညီအစ်ကိုတစ် ဦး သို့တိုးမြှင့်လာသည်နှင့်အမျှသင့်ကိုခံစားရစေသည်’ Grimm ရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင်, ပြီးနောက် 10 ဥရောပရှိအလှပဆုံးရှုထောင့်များသည်အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်…
ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ရထားခရီးသွားဘယ်လ်ဂျီယံ, ရထားခရီးသွားချက်သမ္မတနိုင်ငံ, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထားခရီးသွားဟော်လန်, ရထားခရီးသွားဟန်ဂေရီ, ...